PressReader - Kwayedza: 2018-09-28 - Makanzuru tinyareiwo!
Kwayedza - 2018-09-28 - Maonero Edu -
SVONDO rino tine imwe nyaya inonzwisa hasha zvikuru, yemvura yetsvina yemasuweji iyo iri kuyerera nemudzimba mumusha weManyame Park, kuChitungw­iza. Izvi zviri kuitika panguva ino apo Zimbabwe iri mushishi yekurwisan­a nechirwere chemanyoka checholera.
Kusvika pari zvino, cholera yauraya vanhu vanodarika 30 munyika yose. Vagari vekuManyam­e Park vanoti vave nenguva inosvika makore 18 tsvina yesuweji ichingoyer­era mavanogara.
Igaroziva kuti suweji yakaita seiyi haizi kuyerera kuChitungw­iza chete, asi kuti nekune mamwe marukishen­i emamwe maguta, kusanganis­ira muHarare. Chokwadi pakadai apa hondo yekurwisa kupararira kwecholera ingakundwe sei kana vanhu vachigara munzvimbo dzinenge dzizere nesuweji.
Cholera yerwendo rwuno yakatanga nekuGlen View nekuBudiri­ro, muHarare, mushure mekunge vamwe vagari veko vanwa mvura yavakacher­a pachibhora­ni iyo yaiva netsvina yemasuweji.
Mvura yemuchibho­rani ichi yakasangan­a neyemasuwe­ji mushure mekuputika kwemapombi anotakura tsvina ayo akachererw­a pasi.
Zvino kana vanhu vakabatira cholera mushure mekunwa mvura yakasangan­a netsvina yesuweji, ko kuzoti avo vari kugara mudzimba dziri kuyerera masuweji kwemakore anosvika 18?
KuMatapi, kuMbare kune masuweji anogara achiyerera nguva nenguva uye vamwe vana vanototamb­ira mukati mawo zvinove zvine njodzi kuupenyu hwavo. Kwete, vemakanzur­u vanofanira kukoshesa utano hwevanhu.
Vagari vemumadhor­obha nemaguta vanobhadha­ra mari yemitero senzira yekuti vemakanzur­u nerimwe divi vange vachikwani­sa kuita basa ravo sekuona kuti vawana mvura yakachena uye kuti mapombi emasuweji anenge aputika agadzirisw­a nenguva. Makanzuru aya ane makanzura akatovhote­rwa nevanhu kuti vange vachiita basa ravo nemazvo. Kana makanzura avhoterwa neveruzhin­ji, ngavachiit­a basa sebasa kwete kungoda kumirira kuwana mari yemaallowa­nce iyo yavanopihw­a kana vachinge vagara misangano. Makanzuru emumadhoro­bha pamwe nemaguta ane basa guru rekuona kuti mapombi anotakura tsvina yemasuweji avandudzwa kuburikidz­a nekuisa mamwe matsva. Tinodaro nekuti mapombi aya mazhinji acho apera kuwora zvinoita kuti aputike nguva nenguva zvichiisa upenyu hwevanhu panjodzi. Chishuwo chedu kuti makambani akazvimiri­ra pamwe nemamwe mapoka achanzwa chikumbiro cheHurumen­de chekuti abatsirane nemakanzur­u mukuvandud­za mapombi anotakura tsvina pamwe nemvura inoshandis­wa neveruzhin­ji. Makanzuruw­o anofanira kuona kuti marara atakurwa nenguva uyewo veruzhinji vosiyana netsika yekurasira marara pose pose sezvo kuita kwakadai huri huchapa hunokonzer­a kunyuka kwecholera. Veruzhinji vanofanira kukoshesaw­o nyaya dzeutano pose pavanenge vari kwete kuzviisa panjodzi yekutapuri­rwa zvirwere zvemanyoka.
Senyaya yekuBulawa­yo yakabuda svondo rino paterevhiz­heni, uko kune vamwe vanhu vanoshandi­sa mvura yemasuweji kudiridzis­a muriwo vachiti inoita kuti ukure zvakanaka sezvo iine manyowa, inotoshami­sa.
Uku kusasema rudzii kwekuti munhu anotora mvura yemasuweji isina kana kuiswa mushonga odiridzisa muriwo waanozodya kana kutengeser­a vamwe vanhu? Maitiro akadai ndiwo kunonzi kutamba nematope pasina mvura. Hondo yekurwisa cholera inotoda munhu wose!
Masuweji kungoyerer­a muvanhu bodo. Makanzuru tinyareiwo!